Madrid iyo Jaén, taksiyada waxaa lala raadsadaa Taksee | Androidsis
Madrid iyo Jaén, tagaasida waxaa laga raadiyaa Taksee
Waa kan arji kale oo loogu talagalay kuwa u socdaalaya Madrid ama Jaen laakiin dabcan sidoo kale dadka isla degan labadan magaalo, waxtar u leh kuwa u baahan tagsi oo ma yaqaanaan lambarka taleefanka shirkadaha ama si fudud kuma kalsoona qiimaha lagu heli karo safar gaar ah.
Codsiga waxaa la yidhaa Taksee waxaana hindisay koox ganacsato Isbaanish ah horaantii 2008 markii ay isku arkeen San Francisco oo ay u baahdeen taksi, waxay isku arkeen inay la kulmeen qaska magaalada. «Asal ahaan, waxaan ka fikirnay waxyaabo badan oo beddelaad ah, mana aanan arki karin midka ugu habboon.", ayuu yiri Santiago López, agaasimaha dhaqaalaha ee shirkadda. "Intaa waxaa dheer, si loo ogaado waxa baahiyaha dhabta ah ee qaybta ay ahaayeen kuwa lagu qanci karo iyada oo ay ugu wacan tahay tignoolajiyada cusub waxaan wareysanay taksiilayaal badan, waxayna na siiyeen fikrado aad u wanaagsan«.
Taksee waxaad ku dalban kartaa taksi bilaash ah, ogow waddada, waqtiga la qaatay iyo qiimaha. Fiican si aan qofna u khiyaamayn. Waxaa loo heli karaa Android, iPhone iyo ugu dhakhsaha badan sidoo kale adeegsadayaasha isticmaala Blackberry. Waqtigan xaadirka ah, sida aan sheegnay, waxay diyaar u tahay magaalooyinka Madrid iyo Jaén, laakiin marka la eego guusha weyn ee qalabkani helayo, abuurayaashu waxay rabaan inay ballaariyaan ma aha oo kaliya magaalooyinka kale ee Spain, laakiin sidoo kale Yurub , taas oo aad u wanaagsanaan lahayd, si aanan naloo dillaacin markaan dibadda u baxno.
Waa kan muuqaal si aad u aragto sida ay u shaqeyso.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Taksee! app android
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Madrid iyo Jaén, tagaasida waxaa laga raadiyaa Taksee
Waan ogaa etaxi, in aan ku rakibay, laakiin waligay ma isticmaalin
Etaxi waa in lagu ballansado mareegaha, sax?
Taa beddelkeeda, tani waa in aad ballan ku qabsato taksi leh app waxayna ku raadineysaa meesha aad joogto GPS.
George .. dijo
Waxaan haystaa appka Etaxi labadayda mobiil, app android iyo app iphone ah. Anigu waxaan ahay qof si joogto ah u adeegsada tagaasida magaalada Madrid ilaa iyo Luulyo waxaan kaliya ka dalbadaa barnaamijka. Waxay u shaqeeyaan si cajiib ah, xisaabinta masaafada, waqtiga iyo la socodka jidka tagsigayga ilaa uu ka gaaro meesha aan joogo (sidoo kale geolocates aniga sidoo kale. Ma aha inaan galo cinwaanka meesha aan joogo). Waxaan fahamsanahay in Barcelona iyo caasimadaha kale ee Yurub ay bilaabi doonaan isla codsigaas waxaan awood u yeelan doonaa inaan dalbado taksi meel kasta oo laga sameeyo. Si kastaba ha ahaatee, dhammaan hindisayaashan (Etaxi, Taksee… ..) waxay iila muuqdaan in ay niyad jabsan yihiin. Salaan dhamaantiin.
Ka jawaab jorge ..
Hahahaha, sidee u xoog badan tahay. Waxaan ka imid Jaén waxaana loo malaynayaa inaan noqonay dameerka adduunka… haddana waxay haystaan ​​codsi Madrid (caasimadda Spain) iyo annaga, hahaha. Aad bay u xoog badan tahay !!!!
Ka jawaab ManuMen
Oo waxaan leeyahay… Goorma ayuu codsiga «Tasis» ee meelaha miyiga ah? 😛 - Salaan ka timid Dayaxa!
Ka jawaab Goefry
suuqa aad bay u qiimeeyaan, wax faallo ah oo ku saabsan, ma qof baa tijaabiyey? Miyaan sii joogi doonaa haddii aan isku dayo?
Haa, si xun bay u qiimeeyaan, laakiin hey, mararka qaarkood tartanku wuu sameeyaa si aadan u soo dejin.
Haddii aad codsato tagsiga waxaan dammaanad qaadayaa inay imanayso. Barnaamijku wuxuu si toos ah ugu xiran yahay xarunta taksiga. Waan ogahay tan sababtoo ah mar ay iga soo waceen iyada sababtoo ah qaybta "faallooyinka" waxaan ku tilmaamay inaan haysto xayawaan rabaayad ah oo ay u baahan yihiin inay ogaadaan waxa ay tahay inay u soo diraan tagsiga saxda ah. Oo waxay u shaqeysaa si qumman 🙂
Codsi aad u wanaagsan !!!
Waxaan hore ugu soo dejistay on my Android.
Aan aragno haddii tagaasida aysan wax badan na siinin ...
Ma garanayo sida wadadu u shaqayn doonto. Haddii aad isticmaasho google ama wax la mid ah, wax badan ayay kaga tagaan in laga raadiyo magaalooyinka yaryar, iskaba daa magaalooyinka waaweyn.
Sidoo kale, dariiqu waa kan ugu toosan, laakiin ma aha kan ugu dhaqsaha badan uguna jaban.
Haddii horeba magaalo yar sida Castellón, dariiqa mararka qaarkood waxay ku geyneysaa bartamaha si aad u aado dhinaca kale ee magaalada (gaaban, haa, laakiin gaadiid badan), ma rabo inaan ka fekero Madrid si aad u tagto. ilaa Pinto tusaale ahaan aagga woqooyi, kaas oo ku geynaya tunnel-ka cusub.
Haddii aad u aaddo dhanka Valencia ka dibna aad kor u kacdo waa dhakhso, qiyaastii 15-20 daqiiqo, in kasta oo aad waddo kilomitir badan oo kale.
Ku jawaab cov